#28/10/ #update #Ma #Thandar #ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) #ကိုပါကြီးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ #မသန္တာက | democracy for burma
#28/10/ #update #Ma #Thandar #ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) #ကိုပါကြီးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ #မသန္တာက
tags: " ကိုပါကြီးအလောင်းပြန်ပေးပါ ", ကို မင်း ကိုနိုင်ရဲ့ အပိတ် မိန့်ခွန်း, ဘာထားထုတ်ပြန်ချက်, အကြွေပန်း, အကြွေရယ် စောပေမယ့်, Burma, demonstration, DPW မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်, DPW STATEMENT, FREE LANCE JOURNALIST, GOVERNMENT ARMY, ICRC, Ko Par Gyi, Ma Thandar, Mya Aye, Myanmar, RIP, SHOT, YaeTayZa
၁၉၉၀ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် cr.Min Yan Aung
ကိုပါကြီး က သူပုန်လား အလွတ် သတင်းထောက်လားဆိုတာ MPC က ဂုဏ်ကျက်သရေရှိ ဘောင်းဘီချွတ်ဝန်ကြီးများ၊ ပညာတတ်လူကြီးမင်းများ ကောင်းစွာသိကြပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ – ညီစောလွင် cr. demo fatty
MA THANDAR မနေ့ကမတရားမှုအတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုကြသူနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ လူငယ်များတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နိုင်ငံရေးပါတီများနင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပူးပေါင်းပါဝင်သူပြည်သူအားလုံးကိုကျမတို့မိသားစုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။မနေ့ကလူထုလှုပ်ရှားမှုကတောင်းဆိုသံသည်ကျမတို့မိသားစုရဲ့တောင်းဆိုသံနှင့်ထပ်တူဖြစ်ပါသည်။
ထိုနောက် ပါးစပ်တွင် ငုံထားသော လက်ပစ်ဗုံးအား ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍ ကိုပါကြီးအား အေ၇ှ့ဘက်မှနေ၍ အချက်ပေါင်းများစွာ ၀မ်းဗိုက်နှင့် ရင်ဘတ်တို့အား သေနတ်ဒင်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ထု၇ိုက်ပြီး ဦးခေါင်းမှာ အတော်ပင် ပူလောင်နေသော ရေပူများလောင်းချခဲ့သည်။
ထိုနောက် စစ်ဆေးသူ ဗိုလ်ကြီး (စန်းမင်းအောင်) အရာခံဗိုလ် လှဝင်းဦး တို့မှ တပ်ကြပ်ကြီး(၁) ဦးနှင့် အမည်မသိ နှုင့် ၇ဲဘော် သောင်ဌေးလှိုင် တို့အား သံကြိုးခတ်ထားသော တိုင်မှ သံကြိုးဖြုတ်ခိုင်းပြီး ကြည့်ခိုင်းရာ ကိုပါကြီး၏ နောက်ဘက် ကျောရိုး တခုလုံးနီးပါးမှာ နောက်ဘက်မှ သေနတ်ဒင်ဖြင့် အားကုန် ဆောက်နှက် ရိုက်ထားမှုကြောင့် ကြေမွလုနီးပါးဖြစ်ပြီး ကိုပါကြီး အသက်၇ှူနေမှုမှာလဲ အသက်ပြင်းကြီးများ ဖြစ်သည့်အပြင် မူမှန် မဟုတ်တော့ကြောင်း ၇ိပ်စားမိကြပြီး ဗိုလ်ကြီး မင်းစန်းအောင်မှ ၄င်းတို့ ချောဆွဲလာသော အ၀ါရောင် နစ်ဆန်းထရပ်ကားပေါ်သို့ ရဲဘော်များနှင့် ည ၉နာ၇ီတွင် ဆွဲယူ ထိုးတင်ခဲ့သည်။
ထိုနောက် ကျိုက်မရောမြို့ နှင့် ၄ မိုင်မျှလောက်ကွာသော တပ်ရင်း(၂၀၈)၏ မွေးမြူရေ ခြံသို့ေ၇ာက်၇ှိပြီး ကိုပါကြီးမှာ အသက်ပုံမှန် ရှူရှိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ အားတင်းထွက်ဆိုလာသော စကားသံ သဲသဲကြားရသည်။
အောက်တို့ဘာလ ည ၁၁ နာ၇ီတွင် ကိုပါကြီး အဖို့ ၄င်းခံစားရသော ကျောရိုးကျိုးကြေသည့် ဝေဒနာအာ တောက်တင်း မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး အသက်ထွက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
အောက်တို့ဘာ ၅ ၇က်နေ့တွင် တပ်၇င်း (၂၀၈) ရော်ဘာခြံ အနောက်ဘက် တွင်၇ှိသော တောအုပ်တွင် ကိုပါကြီးအား မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သော စစ်ထရပ်ကားပေါ်တွင် တင်စေကာ မောင်းနှင့်ခဲ့ပြီး နီးစပ်ရာ သစ်ဝါး အခြောက် အဆွေးမြေ့များဖြင့် ၇ဲဘော် ၆ ဦး အရာခံဗိုလ် ၁ ဦး တပ်ကြပ်ကြီး၁ ဦး တို့မှ ဦးဆောင်၍ မီးရှို့ အလောင်းဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုပါကြီးအား မီးရှို့ပြီးနောက်တွင် ကြွင်းကျန်သော အရိုးနှင့် ဦးခေါင်ခွံတို့အား ထပ်မံ မြေမြုပ်ရန် တပ်ရင်းမှူးမှ ညွန်ကြားသဖြင့် အဆိုပါ မီးရှို့သောနေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်း ပေ၂၀၀ လောက်မျှ၇ှိသော သစ်ပင်အို အမြစ်ကြားများအတွင်းသို့ ပစ်ထည့်၍ နီးစပ်ရာမှု အမှိုက်နှင့် မြေဆွေများ ပက်ဖုံးကာ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းပါ……….
လွတ်လပ်စွာ ရှယ်ယူ၍ ပြန်လည် မျှဝေ နိုင်ကြပါသည် (သတင်း အမှန်ပါ)
ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ယူရတဲ့နေ့ မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားကြောင်း တရားဝင်သိရတဲ့နေ့ ဖြစ်နေပါတယ်
ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး ကို အစိုးရ စစ်တပ်မှ မတရားဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကိုပါကြီး ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန္တာ ၏ အဖွဲ့အစည်း DPW မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
U Aung YeSoe
သေဆုံးသွားသူ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး ၏ပုံလေးပါ
ICRC in Burma should have access to independently investigate the cause of death of Ko Aung Kyaw Naing (aka) Ko Par Gyi so that whosoever responsible will be held accountable possible
ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်ကိုပါကြီးသေဆုံးမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အချိန် ညနေ ၄ နာရီမှ ၆နာရီထိ
နေ့ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက် တနင်္ဂနွေနေ့
လူငယ်ကျောင်းသားများ သတင်းထောက်များ ၈၈မျိုးဆက်များ နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ပါဝင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ko Myoe ♫ ★♪ ★ ♫ ★ ♪… ကမ္ဘာမကြေဘူး … ♫ ★♪ ★ ♫ ★♪
★ ကမ္ဘာမကြေဘူး… ♫ ♪ ♫ ♪…
ငါတို့ တစ်တွေရဲ့ သွေးနဲ့ ရေးတဲ့ မော်ကွန်းတွေ၊… ♫ ♪ ♫ ♪…
★ တော်လှန်ရေး …… ♫ ♪ ♫ ♪…
အော် .… ♫ ♪ ♫ ♪… သူရဲကောင်းတို့ ရေ … ♫ ♪ ♫ ♪…
အာဇာနည်တွေ နေတဲ့ တိုင်းပြည် … ♫ ♪ ♫ ♪…
ရဲရဲတောက် ဒို့ပြည်သူတွေ …… ♫ ♪ ♫ ♪…
★ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း …… ♫ ♪ ♫ ♪… ရာဇ၀င်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ရပြီး အဖိုးရေ …… ♫ ♪ ♫ ♪…
★ သခင်အောင်ဆန်း … နိုင်ငံတော်လည်း သွေးစွန်းခဲ့ပြီ အဖရေ …… ♫ ♪ ♫ ♪… သြော် … လုပ်ရက်ကြပေ …… ♫ ♪ ♫ ♪…
ပေတရာပေါ်မှာ ပြည်သူ့ အလောင်းတွေ …… ♫ ♪ ♫ ♪…
အတုံးအရုံး လဲပြိုကာနေ၊… ♫ ♪ ♫ ♪…
★ ညီအစ်ကိုတို့… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ စီးတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဖူး၊… ♫ ♪ ♫ ♪…
မတွေဝေနဲ့…… ♫ ♪ ♫ ♪…. ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော၊… ♫ ♪ ♫ ♪… သြော် ……… ♫ ♪ ♫ ♪… သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင် တော်လှန်ပြုမလေ၊
★ ညီအစ်ကိုတို့…… ♫ ♪ ♫ ♪… ပေတရာပေါ်မှာ ကျတဲ့သွေးတွေ မခြောက်သေးဖူး၊… ♫ ♪ ♫ ♪…
မတွေဝေနဲ့….… ♫ ♪ ♫ ♪… ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသော၊… ♫ ♪ ♫ ♪…
သြော် … သူရဲကောင်းတို့ လို ခိုင်မာပီပြင် တော်လှန်ပြုမလေ၊
အမျိုးချစ်တဲ့ ဒို့ တာဝန်ပေ …… ♫ ♪ ♫ ♪…
ကမ္ဘာမကြေဘူး…… ♫ ♪ ♫ ♪…… ♫ ♪ ♫ ♪…………………………………။ ★★★★★★★★★★
ကိုအောင်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီးသေဆုံးမှုအတွက်
တပ်မတော်၏ ဖြေရှင်းမှု အပေါ် ပြင်းတန်စွာရှုတ်ချကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
“ ကိုပါကြီးသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်း
လူ့အဖွဲ့အစည်း)၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ”
နေ့စွဲ ။ ။ ၂၄ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ အောင်တိုဘာလ၊ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Daily သတင်းစာပါ
“ တစ်လကြာအဖမ်းခံထား ရသည့် ကိုပါကြီးကို အသေဖမ်းဆီးမိဟု တပ်မတော်
ထုတ်ပြန် ”ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်း
လူ့အဖွဲ့အစည်း)၏ သဘောထားကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
ကိုပါကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည်
နှင့်အညီ မည်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို မိမိ၏ဘ၀လုံခြုံမှု၊ အသက်ရှင်သန်
နေထိုင်နိုင်မှုအတွက် တရားဥပဒေ၏ အကာအကွယ်နှင့် အထောက်အပံ့များကို
ယခုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထိန်ချန်မှုများ၊ သံသယဖြစ်စရာများ များစွာ
ရှိနေပြီး နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အား တရားဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ယခုကဲ့သို့
လက်လွတ်စပယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါးစေသည်။
ထိုသို့ တရားဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ အပြင်းအထန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အမူမှန်အတိုင်း ပေါ်ထွက်လာစေရန် အစိုးရတာဝန်
ရှိသူများမှ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးရန်နှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်
သူများအား တရားဥပဒေအရအရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ
– ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း
PHOTO CR. NIK NAYMAN
photo cr. Nang Aung Htwe Kyi
သေငယ်ဇောနဲ့ မျောနေမယ့် အဖြစ်ထက်တော့
အဖြူရောင် အနာဂတ်တခုတည်း မဟုတ်ဘူး..
မအေးချမ်းတော့တဲ့ ဘ၀တွေ အတွက်
ဘာလဲ ? ဘယ်လဲ ?
ပြည်သူ သတ်သမား တပ်မတော်လား?
၀ရဇိန်သုံး၍ ဖြိုခွင်းလိုက်စေချင်ပါရဲ့ လို့
ကိုပါကြီး က သတင်းထောက် ဖြစ်ဖြစ် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမား ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို တရားလက်မဲ့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ပြီးသတ်တာ ကို လုံးဝ ဆန့်ကျဉ်ပါသည်။ လက်နက်မဲ့ သတင်းထောက် ကိုသတ်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မူကြီးကိုကျူးးလွန်ခြင်း ဖြစ်သလို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမား စစ်အကျဉ်းသားကိုသတ်ခြင်းဟာလဲ ဂျီနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်း ကိုချိုးဖောက် ပြီး နိုင်ငံတကာ ပြစ်မူကြီးကို ကျူးးလွန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပါကြီး အမူကို ကျူးးလွန်သူ အားလုံးကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ မှထိထိ ရောက်ရောက်အရေးယူပေးပါ။ ကာချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မှ ထိထိ ရောက်ရောက်အရေးယူပေးပါ။ ကိုပါကြီးအမူ ဟာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမရှိ ဘက်မလိုက်မူ ရှိမရှိ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမူရှိမရှိ ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ချင်း ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် စစ်တပ်ဟာ ဥပဒေ အထက်မှာရှိမရှိ ဒီမိုကရေစီစံ တွေကိုလေးစားခြင်း ရှိမရှိ လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစား လိုက်နာခြင်း ရှိမရှိ အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးကို လေးစားလိုက်နာခြင်း ရှိမရှိ ကို စိန်ခေါ်လိုက်ချင်း ဖြစ်သည်။ ကိုပါကြီး အတွက် တရား မျှတမူအတွက် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ သို့မဟုက်ပါက ယနေ့ ကိုပါကြီး မနက်ဖန် သင့် အလှည့် ရောက်လာလိမ့်မည်။ [Burma Democratic Concern (BDC)]
← !! #update #6/11 #BURMA #MYANMAR #MISSED #Reporter #Ko #Par #Gyi #SHOT #during #interrogation
#CRIME #คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ #ตร.ปส.วิสามัญ 1 ศพ #ยึดยาบ้า A1 #94,000 เม็ด @ อ. #ฝาง จ. #เชียงใหม่!! →